Maxaa iska badeley kursiga Aqalka Sare ee uu ku tartamayo Cabdi Qeybdiid? - Bulsho News
Baarlamaanka Soomaaliya: Wax ka ogow xildhibaanno 20 ka sano ka...
Maxaa iska badeley kursiga Aqalka Sare ee uu ku tartamayo Cabdi Qeybdiid?
Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa soo saaray liiska labadii xildhibaan ee ka haray xubnihii Aqalka Sare ee Galmudug kasoo baxayay.
Liiska waxaa ugu horeeya Jeneraal Cabdi Cawaale Qeybdiid oo soo noqday madaxweynihii hore ee Galmudug, iyo taliyihii hore ee booliiska Soomaaliya.
Hase yeeshee tartanka kursiga Cawil Nuur Cali oo ah nin aanan aad wax looga aqoonin, xilli kursigaasi uu shaaciyay in uu ku tartami doono madaxweynihii kale ee hore ee Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo hadda sida muuqata laga reebay liiska musharixiinta.
Xaaf ayaa horey ugu hanjabay in dhib badan dhici doono haddii laga reebo liiska musharixiinta Aqalka Sare, hase yeeshee muddooyinkii ugu dambeeyay hadalo badan lagama maqal.
Haddaba maqaalkan waxa ay BBC-du baahisay 12-kii Agoosto ee sanadkan.
Waa kuma Cabdi Qeybdiid ?
Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiid waayo aragnimadiisu ugu badan wuxuu ku soo qaatay dhanka ciidamada, isaga oo ka gaaray darajada Genaraal.
Wixii ka horreeyay dowladdii lagu soo dhisay Carto, wuxuu ka mid ahaa hoggaamiyeyaashii hubeysnaa ee Muqdisho.
Wuxuu xubin ka ahaa baarlamaankii dowladdii Cabdi-Qaasim Salaad Xasan, wuxuu sidoo kale soo noqday Wasiirkii gaadiidka Cirka & Dhulka ee dowladdii Cali Mahdi, marna wuxuu noqday wasiirkii macdanta ee dawladd federalka ee madaxweynaha uu ka ahaa Sheekh Shariif Sheekh Axmed.
Sannadkii 2012-kii ilaa 2015-kii wuxuu ahaa Madaxweynihii Maamulka Galmudug ee fadhagiisu ahaa magaalada Galkaacyo.
Sannadkii 2016-kii ayuu ka mid noqday Aqalka Sare ee baarlamaanka Soomaaliya xilkaas oo wali uu hayo.
Taariikhda kooban ee Xaaf?
Xaaf waa madaxweynihii xilka ku wareejiyay Qoorqoor
Axmed Ducaale Geelle (Xaaf) mar waa oday dhaqameed oo wuxuu ka mid ahaa odayaashii dhaqanka ee ka qayb galay shirkii Carta ee horraantii 2000. Xilligaas ayuuna siyaasadda si toos ah ugu soo biiray.
Wakhtigaas ka hor lama oran karo siyaasadda Soomaaliya kuma lug lahayn. Wuxuu ka mid ahaa raggii aadka u taageeri jiray Jeneraal Maxamed Faarax Caydiid.
Siyaasadda wuxuu kaga soo biiray waddadii uu markii horeba jeexday ee dhanka dhaqanka maadaama hannaanka wax qeybsiga uu ee siyaasadda Soomaaliya lagu saleeyay hannaanka qabiilka ee 4.5.
Wuxuu miisaan siyaasadeed iyo mid dhaqan ku leeyahay deegaannada Galmudug iyo magaalada Muqdisho oo muddo uu ku noolaa.
Sanadihii sagaashameeyadii, wuxuu ka mid ahaa ganacsatadii dibadda u dhoofin jirtay Muuska Soomaaliya. Wuxuu xiriir wanaagsan la lahaa shirkadda khudaarta ee Dole, oo Maraykanka laga leeyahay.
Shirkaddaas oo madax uu ka ahaan jiray Xaaf iyo mid kale oo lagu magacaabo Somalfruit, ayaa Muuska Soomaaliya caalamka u iibgeyn jiray.
Isla sanadahaas, wuxuu aad u kobciyay hantidiisa ma guurtada ah ee uu ku leeyahay gobollada qaar ee Soomaaliya.
Wuxuu ka mid ah ahaa dadkii billaabay in dayaaradaha ay ka shaqeeyaan Soomaaliya. Wuxuu dhisay garoonka dayaaradaha ee Lambar-50.
Bishii May ee sannadkii 2017, ayaa loo doortay inuu noqdo madaxweynaha maamulka Galmudug. Wuxuuna xilkaa wareejiyay bishii Abriil sannadkii 2020-kii ka dib markii la doortay madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qoor-qoor. Waxay ahayd doorasho uu muran iyo khilaaf badan ka dhashay.
Muhiimadda Kursiga Aqalka Sare
Aqalka Sare waa mid ka mid ah labada Gole ee baarlamaanka Soomaaliya oo kala ah Golaha Shacabka iyo Aqalka Sare ama Aqalka Odayaasha.
Inkastoo arrimaha la xiriira sharciga ay tahay howsha Aqalka Hoose 9Golaha Shacabka), haddana Aqalka Sare qudhiisu qayb ayuu ku leeyahya gaaridda go’aamada masiiriga ah.
Sida ku xusan xeer-hoosaadka Aqalka Sare, shaqada xildhibaannada waa in ay matalaan deegaannada laga soo doortay iyo maamul-goboleedyada ay ka yimaadeen.
Kursigaan la filayo in ay ku tartamaan Cabdi Qeybdiid iyo Xaaf, oo deegaan doorashadiisu tahay magaalada Dhuusamareeb, waxaa xubnaha tartamaya dooranaya baarlamaanka mamaulkaas, ka dib marka uu soo xulo madaxweynaha maamulka Galmudug, una gudbiyo Baarlamaanka maamulka.
Cali Baashi Faarax Cali oo ah siyaasi ka soo jeeda Galmudug isla markaana horey uga tirsanaa maamulka Ahlu suuna ee mar ka talin jiray bartamaha Soomaaliya, ayaa sheegay in kursigaan uu muhiim yahay loona baahanyahay in doorashadiisu ku dhacdo hab wanaagsan oo nabad ah.
“Arrinta xalka wanaagsan ah waa in kursigaan dhexda la dhigo oo ay u tartamaan dadka loo xulo oo ay sidaas guushu ku raacdo qofkii calafku u yeesha,” ayuu yiri Cali Baashi.
Wuxuu intaas ku daray in haddii ay dhacdo in kursigaas loo maro waddo khaldan, uu cawaaqib xun yeelan karo.
Sababta Xaaf iyo Qaybdiid ugu sharaxanyihiin Kursigaan
Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa sheegay in sababta uu kursigaan ugu sharaxyahay ay tahay inuu doonayo inuu dadkiisa ugu shaqeeyo.
“Mar walba kuraasta waxaa loogu adeegaa gobalka aniguna waxaan doonayaa in aan u shaqeeyo gobalka,” ayuu yiri Xaaf oo BBC-da u warmay.
Xarunta ay ku shiraan xildhibaannada Aqalka Sare ee Soomaaliya
Xaaf oo 16- sano soo ahaa xubin ka tirsan Golaha Shacabka ayaa sheegay in uusan doonin hadda inuu Aqalka Hoose dib ugu laabto, balse uu dor bidayo midka odayaasha oo ah Aqalka Sare.
“Waajibku wuxuu ahaa in la igu sharfo oo aan la igula tartamin”, ayuu yiri Xaaf oo ka hadlayay sababta uu ugu qalmo kursigan.
Xaaf oo dhawaan ka hadlayay munaasabad lagu qabtay magaalada Muqdisho, ayaa sheegay in uu jiro qof uu madaxweynaha Galmudug la jecel yahay kursigan, balse ma uusan magacaabin cid gaar ah.
Wuxuu intaa ku daray “Ma filayo in madaxweynaha Galmudug iga hor istaagayo doorashada.”
Mar BBC-du isku dayday in ay wax ka waydiiso musharaxnimadiisa iyo sababta kursiga uu mar kale u doonayo, wuxuu sheegay in uusan hadda doonaynin inuu arrimahaan ka hadlo, balse dad si aad ah ugu dhow ayaa xaqiijiyay inuu musharax yahay, kuna hanweynyahay inuu xilkiisa sii hayo.
Senatar Cabdi Qaybdiid oo hadda ka mid ah saraakiisha hoggaaminaysa dagaalka ka socda qaybo ka mid ah deegaannada Galmudug ee u dhaxeeya Ciidamada dowladda iyo Al- Shabaab, waxaa lagu tilmaamay arrintaas in ay muujineyso ololaha uu ugu jiro in uu sii adkeysto xilkiisa.
Sannadkii 2016-kii, mrakii magaalada Cadaado loogu doortay Cabdi Qaybdiid in uu ka mid noqdo Aqalka Sare, hadal uu si kooban u jeediyay oo uu kaga hadlayay doorashadiisii xiligaas, wuxuu ku sheegay in xubanaha baarlamaanka Galmudug ay cod aqlabiyad leh ku doorteen.
Wuxuu yiri: “Haddii tartan la galo nina wuu guulaysanayaa nina wuu harayaa. Aad iyo aad ayaana ugu faraxsanahay in xildhibaannada baarlamaanka Galmudug ay si aqlabiyad ah codkooda ii siiyeen. Waxaan rajeynayaa in codkaas aan ugu shaqeeyo Galmudug iyo Soomaaliya oo dhan”.
Emile Heskey Oo Sameeyay Saadaalinta Horyaalka Premier League
Guddiga Xalinta Khilaafaadka Oo Soo Saaray Habracyada Loo...
Qarax Sabab Dhimashada Mas’uuliyiin Ka Tirsan Gobalka Hiiraan...
Warhol in Tehran: Iranians flock to American pop...
Polydor Records: Maxay tahay shirkadda la wareegtay heesta...
Basaasnimo: Maxay tahay xiisadda ka dhex qaraxday Turkiga...
Sawirro: Farmaajo oo maanta u baxay SAFAR dibadeed...
Exposed: UK clinics still offering to ‘restore virginity’...